SNM maalinta Ciidda maxay samayn doonaan? | allsanaag
SNM maalinta Ciidda maxay samayn doonaan?
Xasuuqii ugu xumaa ee SNM gaystaan maalin Ciid ah ayeey gaysteen, oo dad salaadii ciida tukanayey ayeey xasuuqeen
March18, 1991, Jabahaddii SNM garabkii Habar yoonis ayaa soo gaaray gobolka Sool. Waxay wateen 17 Tiknimo ah oo ay leeyihiin beesha Habar yoonis, maalintaas Isaaqu waxay dileen sideed qof oo reer guuraa ah oo ka soo jeeda beesha Dhulbahante, waxayna bililiqaysteen hanti waxay lahaayeen. Isla maalintaa 11 Tikniko oo ay leeyihiin beesha Habar Yoonis/ Sacad Yoonis iyo gaari weyn oo ay maleeshiyaad ka buuxaan ayaa waxay yimaadeen ceel biyaha laga cabo oo la yiraahdo Dogoble. Maleeshiyaadka ninkii watay oo lagu magcaabi jiray Libaaxo, oo magacan loogu bixiyey dilka iyo xasuuqa . Halkaa waxay ku xasuuqeen 46 qof oo aan hubaysnayn oo ka soo jeeday Allah ha u wada naxariistee beesha Dhulbahante/ Naalaye Axmed. Waxay kaxaysteen oo Isaaqu bililiqaysteen dhamaan xoolihii ay haysteen
Maalin ka dib 19 March, 1991 maleeshiyaadKII SNM, oo ku hubaysan hubkii ay ka soo bililiqaysteen qaybtii 26aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee xarunta u ahayd Hargaysa, waxay tageen meesha lagu magcaabo Bancade oo u dhow Xudun, oo ay degaan beelaha Naalaye Axmed iyo Reer Jibriil, Bulshadii halkaa ku noolayd waxay arkeen Gawaari waaweyn oo ku soo socota oo ka lulmanayaan calanka SNM. Waxay u maleeyeen inay nabad u socdaan . Gawaarida Tiknikadu way ka danbeeyeen . Maleeshiyaadkii SNM waxay ku yiraahdeen dadkii ku soo ururay ” waxaan u soconaa nabad ee hubka iska dhiga” . Nimankii ka soo jeeday reer Jibril,ee Dhulbahante waa dhigen qoryihii ay wateen , intaa ka dib Tiknikadii ayaa timid 30 qof oo ka soo jeeda beesha Dhulbahante ee markaas hub ka dhigista lagu sameeyey ayaa halkaa lagu xasuuqay , Isaaqu maalintaas waxay bililiqaysteen Geel badan
Xasuuqii ugu danbeeyey wuxuu dhacay maalin Ciid ah, wuxuuna ka dhacay Qaloocato, Dadkii maalintii dhintay badnaashaha tiradooda Isaaq waxay u yaqaaniin Qooro taag. oo ay ka wadaan dadkii dhintay cawradooda ayaa taagan
Dadkii dhintay maalintaas waxa ka mid ahaa labo nin oo la dhashay Fu’aad Adan cade, oo markii danbe isagana guriga looga taliyo Beelaha Isaaq Isagana gaari lagu jiirsiiyey duhur cad
Ugu danbayntii saraakiishii xasuuqan gaystay waxa madax u ahaa jabhadooda Siilaanyo iyo Muusi Biixi, waxaana lagu magcaabi jiray nimankii xasuuqyadan gaystay Libaaxo, Maxamed Faarax Cali daad, Cisman Cawed Xaashi (Dacasle) iyo Carab Ducaale Cilmi. Maanta Muuse Biixi xasuuq kale ayuu doonayaa , laga yaabee sidii dhaqanka u ahayd jabhadda beelaha Isaaq inay maalinta Ciidda qaadaan. Dhamaan xasuuqyadan SNM marka ay gaysanayaan dawladdii Soomaaliya waa burburtay, Allah ha u naxariistee Siyaad Bare waqtigaas Nigeria ayuu joogay oo dalka waa ka baxay. Dadka la xasuuqayey ma hubaysnayn. Degaanada xasuuqa lagu gaystay mid ka mid saldhig ciidan kuma ool oo waxa loo socday waa xasuuq Isir nacayb ah.
← Gaas oo Xilka Qaadis Ku Sameeyay Agaasimayaasha Hay’adaha PSS iyo PIA. BMW AYAA KAFAN LOOGA DHIGAY →